Dare reSenate Rotanga Kutonga VaTrump neChipiri
Dare reparamende yepamusoro muAmerica, reSenate, riri kutanga kutonga mangwana, Chipiri, vaimbove mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, richivapomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuita mhirizhonga iyo yakakonzeresa kufa kwevanhu vashanu mwedzi wapera.
VaTrump nevatsigiri vavo vanoti sarudzo yemutungamiri wenyika yaakabirwa, izvo zvakapa kuti mhirizhonga iyi iitike musi wa Ndira 6 VaTrump vachiri pachigaro chemutungamiri wenyika.
Kutongwa kwaVaTrump nedare reSenate kunotevera kuwanikwa kwavakaitwa vaine mhosva iyi nedare reHouse of Representatives mwedzi wapera.
Kutongwa kwenyaya inobata mutungamiri weAmerica mudare iri ndekwechina munhorooondo yeAmerica, uye kuri kwechipiri VaTrump vachitongwa nedare reSenate, izvo zvisati zvamboitwa nemutungamiri weAmerica.
Muongororo yakaitwa nenhepfenyuro yeABC News yakabatana nekambani inoongorora nekutsvagiridza zvakasiyanasiyana, ye IPSOS, vanhu mu America vanoita zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana (56%) vanoda kuti VaTrump vawanikwe vaine mhosva uye kuti varambidzwe kukwikwidza musarudzo dzipi zvadzo kwehupenyu hwavo hwese.
Izvi zviri kuitika panguva iyo bato re Republican Party riri kunetsena pacharo, vamwe vachitsigira VaTrump asi vamwe vachiti bato ravo iri rarasa gwara.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Muzvinafundo Stan Mukasa, avo vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania, mudunhu re Pennsylvania, vanoti vatsigiri vaVaTrump vazhinji vachena vari kutya kuti vanhu vasiri vachena vari kuwandisa muAmerica izvo zvichakonzera kuti vachena vave vashoma pane mamwe marudzi ari muAmerica mumakore anotevera.